I-Thyme: izibonelelo, ukusebenzisa, ukuchasene, zokupheka
Impilo yabasetyhini Amabhunga Abantu
I-Thyme: zokupheka, isicelo, inkcazo
Iinzuzo ze-thyme kunye neempawu zonyango
I-thyme okanye i-thyme, i-thyme iyisityalo esingapheliyo esinezinga eliphezulu ukuya kuma-40 cm ububanzi beentyantyambo ezincinci kunye neentyantyambo ezibuhlaza. Ixesha lembali le-thyme liwela ngoJuni-Julayi, kunye nokuvuthwa kweziqhamo ekupheleni kuka-Agasti noSeptemba.
I-Thyme isityalo esaziwa kwaye sabhalwa malunga namaxesha amandulo. Ngokomzekelo, ososayensi wasePheresi, ifilosofi kunye nogqirha uVicenna wachaza ukuba i-thyme inceda ukubulala iilum, ukuphelisa ukucaphukisa okubangelwa zizilwanyana, ukukhulula intloko. Okwangoku, isityalo sisetyenziselwa kakhulu kumashishini athengisayo, ngenxa yobuninzi be-thyme yamafutha abalulekileyo, kunye nokupheka, njengexesha lokuphunga kunye ne-cosmetology, ukwenzela ukuveliswa kwemilomo, isobho, i-creams, i-toothpastes njalonjalo.
I-Thyme yinto enyanzelisayo yokuhlwayela.
I-Thyme: iimpawu zonyango
Ngaphezulu kweminyaka emide yesicelo, i-thyme iye yafumana indumiso yabaninzi bezinzulu kunye nodokotela. Idibanisa ubuhle kunye neenzuzo ezibalulekileyo, kunye neendawo eziphilileyo zokuphilisa, ezifana ne:
Ngombulelo kumpembelelo kunye ne-disinfectant effect, isityalo sisoloko sisetyenziselwa ukuphatha izifo ezinxulumene nemiphunga: i-bronchitis, i-asthma, ukukhwehlela.
I-Thyme: zokupheka kwamachiza omntu
Ukuvunwa kwengca kwenzeka ngexesha leentyantyambo zityalo. Ukuqhekeza amasebe kuyimfuneko ukuze kungabikho ukukhupha i-thyme kunye ne-rhizome. Ukucwina kwenziwa ngaphandle. Emva kokuba i-thyme iphelile, kuyimfuneko ukuyiphula kwaye isuse iimpawu ezinzima.
Ukusuka kwi-thyme ungenza itiye, i-decoctions, i-infusions kwaye ungeze kwindlu yokuhlambela ngamanzi.
I-Recipe 1: ukusuka kwi-bronchitis kunye ne-asthma ye-bronchial
Iresiphi efanelekileyo kakhulu encedisa ukukhawuleza inkqubo yokubuyisela kuyo nayiphi na izifo ezixhatshazwayo.
Elinye isipuni lesitshalo esomileyo elixutywe kunye neglasi yamanzi abilayo kwaye igxininise iiyure ezingama-2-3 kwisitya esivalekile;
Ukuxinwa, ukususa izityebi zesityalo kwaye uthathe amaxesha amathathu ngosuku ngemaminithi 20 emva kokutya 1 tbsp. l.
I-Recipe yesi-2: ukusuka ku-laryngitis kunye nokomile emqaleni
Hlanganisa i-thyme kunye ne-plantain kunye ne-chamomile ukuya kwelinye;
Ukuqokelela indebe yamanzi abilayo kwaye ugxininise imizuzu engama-90;
Thatha 1 tbsp. l. Amaxesha amathathu ngosuku malunga nesiqingatha seyure ngaphambi kokutya.
I-Recipe 3: ukusuka kwisikhwehlo "sabashushu"
Ukuba wena okanye umntu osondelene nawe unobungozi ngenxa yokutshaya, unokuphucula kakhulu imeko yakhe yempilo ngokusebenzisa isiluleko sokulungiselela nokusetyenziswa kwe-tincture.
Hlanganisa i-thyme, iintyatyambo ze-hawthorn kunye namaqabunga e-currant ngokulinganayo;
Dlulisa iglasi yamanzi abilayo kwaye ugxininise kwisitya esivaliwe ngokukhawuleza malunga neeyure ezili-10;
Thatha amaxesha amane ngosuku nge 1/3 indebe.
I-Recipe 4: i-alcohol tincture yokuxuba amajoyina
Gcwalisa ½ ngesitya se-litre-litre kunye namaqabunga amnandi kunye neentyatyambo ze-thyme;
Thela iikomityi ze-vodka kwi-container, vala i-bhotile ngokukhawuleza kwaye uyithumele kwigumbi elomileyo elinesibini iintsuku eziyi-14-16;
I-Tincture iyona nto ibaluleke kakhulu yokuxuba amajoyina, ukususa intlungu.
I-Thyme yityalo ekhuselekileyo, kodwa kukho ukuphazamiseka. Ngokwakheko i-thymol, leyo, xa idlula, ingabangela imiphumo engathandekiyo emzimbeni, ngokukodwa, i-hyperthyroidism. Ngako oko, ukumkelwa akucebisi ukuba abafazi abakhulelweyo nabantu abaneengxaki ezinzulu kunye neentso zesisu.
Kutheni i-immunity iyancitshiswa nendlela yokuyibuyisela?
I-sauna ene-Infrared: ukuchasene
Siphinde sibuyele umoya onobuhle ngoncedo lweziqholo
Kutheni ufuna ukulala komntu umntu omdala?
Ukujamelana nokukhawulela ekhaya
Izina lomntu onothando: indlela yokuchaza?
Kutheni iintombi ezintle zihlala zodwa?
Indlela yokwenza umbane waseTshayina ngoNyaka omtsha ngezandla zakho
Izinto ezili-25 zokuzama ngesondo
I-Cocktail "Iphunga" ngokumangaliswa
I-Kurban Bayram 2017: Ndiyakuhalalisela kwiSMS, iposi kunye namagama akho
Indlela yokusinceda ukuba sixoxe ngamanga. Iingcebiso kubazali
IMascot yeFeng Shui Pi Yao
Izitya ezilula kunye nezolisayo
Umbala wePeach ngaphakathi
Sophia Loren Isidlo Sosuku Lweentsuku
I-Gymnastics yabasetyhini abakhulelweyo kwi-fitball
Ukutya kwesiNgesi: kuyingozi okanye kuyincedo?
Kutheni sifuna i-strip-plastiki?
Intellectual chic: yenzele abalandeli beiglasi
Isonka esinamaqabunga amancinci